Ọ bụ ezie na dị ọcha, na interface bụ obere clunky. E nwere TON nke atụmatụ jupụtara na ngwa a ma nke ahụ bụ, obi abụọ adịghị ya, ihe ịma aka maka ịchọta menu ziri ezi na ebe kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na ihe niile ịchọrọ ime bụ ịgbakwunye ihe omume ngwa ngwa ma kpọọ mmadụ ole na ole, ọkachamara nwere ọmarịcha ọkwa 4 dị mma.
Ihe ọzọ bụ usoro ịkwụ ụgwọ na ịnye tiketi siri ike, nke a bụ isi ọwụwa nke ị chọghị iji aka gị mee! Eventbrite nwere usoro nkwụghachi ụgwọ!
Amaghị m ogologo oge TicketMaster, ya na njikwa ya na ụlọ ọrụ ahụ na ụgwọ dị oke egwu, ga-eguzo ma hapụ nnukwu mmalite dị ka Eventbrite na-aga n'ihu na-eto eto na ihe ịga nke ọma! Ha nwere ike ha agaghị enwe ike ijide, ma ọ bụrụ na Eventbrite gara n'ihu na-agbanwe agbanwe!